हाँसोले साथी बनाउँछ! - Blogs of Sagar Prasai
हाँसोले साथी बनाउँछ!
हिजो दिउँसो बबरमहलबाट बानेश्वर तिर जादै थिएँ। म भन्दा अलि अगाडी एकजना भर्खरको केटा दुईतिरै पँहेलो जर्किन राखेको साईकल डोर्याउँदै थियो। उ हिडेको हेर्दा लाग्थ्यो, ती जर्किन निकै भारी छन्। यतिकैमा अलि स्पिड भएको एउटा बाईक मलाई ओभरटेक गर्दै अघि बढ्यो र त्यो साईकलको एकापट्टिको जर्किनमा थोरै ठोक्कियो। साईकल डोर्याउने केटाले थाम्न खोज्दा खोज्दै पनि साईकल लड्यो। जर्किनमा भएको माटो जस्तो केहि कुरा छरपष्ट भयो। साईकल भन्दा अलि अगाडी गएर ठक्कर दिने बाईक एकैछिन रोकियो, र फेरी स्पिडमा अगाडी बढ्यो। साईकलवाला एकदमै रिसाएर बाईकतिर हेर्दै गाली गर्न थाल्यो।
यतिकैमा म लडेको साईकल छेउमा पुगेँ र स्कुटर रोकेँ। साईकलवाला एकोहोरो गाली गर्दै भुईमा पोखिएको कुरा सोर्हेर फेरी जर्किनमा हाल्दै थियो, उसले मलाई यादै गरेन। मैले "केहि सहयोग गर्नुपर्छ भाई?" भनेर सोधे।
उसले केहि भनेन। म तिर हेरेन पनि। आफ्नो काम गरिरह्यो। एकछिन सम्म म त्यहिँ भएपछि उसले रिसाएर केहि भन्दै म तिर हेर्यो। तर उ टक्क रोकियो। पहिला उसले मेरो स्कुटरका चारवटा चक्का हेर्यो अनि मेरो खुट्टालाई अडिग बनाउनको लागी बाँधेको बेल्ट हेर्यो।
अनि बल्ल बोल्यो- "तपाई मलाई सहयोग गर्न नै सक्नुहुन्न दाई।"
उसको कुरा म फिस्स हाँसे। उ फेरी माटो उठाउन थाल्यो।
मैले त्यहाँबाट अगाडी बढ्न स्कुटर स्टार्ट गरेँ। म अगाडी बढ्नै लाग्दा उसले म तिर हेर्यो अलि मुस्कायो र भन्यो -"तर थ्याङ्क यू है दाई।" अनि उसले हात उठायो।
मलाई एकाएक कस्तो भएर आयो। मैले पनि हात उठाएर उसलाई बाई भने। अनि उ फेरी आफ्नो काम गर्न थाल्यो। यसपाली उसले कसैलाई गाली गरेन। म पनि आफ्नो बाटो लागेँ।
मैले पहिला कतै पढेको थिएँ- "रिसाउनु भयो भने अनुहार चाउरी पर्छ, हाँस्नुभयो भने नया साथी बन्छ"। आज एकछिनको थोरै मुस्कानले म र ती साईकलवाला भाई साथी त भयौँ भन्न मिलेन। तर हाँसोले उनको र मेरो अनुहार चाउरी पर्नबाट चाहिँ बचायो। :)